China Steel intambo umzi-mveliso kunye nabavelisi |Gostern
Umphezulu: I-galvanized, i-Ungalvanized, i-Stainless, i-PP / i-PVC / i-PE ifakwe.
I-tensile: 1570 mpa ukuya kwi-2160 mpa.
ukupakisha kwi-plystic, iplanga okanye i-plywood reels 25m ukuya kwi-2000m.
Ukuhanjiswa: Iintsuku ezingama-30 kwisikhongozeli seenyawo ezingama-20(iitoni ezingama-24.5).
Isicelo sokuloba ngomkhondo
Ukuphakamisa isicelo sokunyusa
Intambo yokudibanisa yokuloba
3(1×19), 3(1×24), 6(1×19), 6(1×24), 6(1×7), njalo njalo OEM
Intambo yentsimbi yentsimbi engajikiyo
Isicelo sokuphakamisa iWinch
Ulwakhiwo lweentambo zentsimbi kunye nobubanzi
Umphezulu Ukwakhiwa Ububanzi (mm) Tensile Strength
Ingavuzwa, 1x7 0.6--14 1270N/mm2--1960N/mm2
Umbane ofakwe igalvanized, 1x19
Ifakwe igalvanized eshushu, 1x12
IPVC/PE/NYLON, 7x7 (6x7+IWRC)
Insimbi engagqwali AISI304/316 6x19+IWRC
Ulwandlalo kunye nomsebenzi wegrisi yomphezulu wentambo yocingo
Phantse zonke iintambo zocingo zisebenza kwindawo enzima kakhulu: indawo emanzi, ukukhanya kwelanga, indawo eqinileyo yeasidi, umhlwa oqinileyo kunye nokunxiba kuchaphazela kakhulu ubomi benkonzo.Kwinkqubo yokuvelisa kunye nokusetyenziswa, intambo yocingo kufuneka ifakwe i-oyile rhoqo ukwenzela ukomeleza ukusebenza kwentambo yocingo kunye nokunyusa i-coefficient yokuthambisa ngomatshini wentambo yocingo kunye nezixhobo zoomatshini ukunciphisa ukuguga kwentambo yocingo.
Ukuhlelwa kwentambo yocingo
Ngokwecandelo lemilo yentambo yocingo: intambo yocingo ejikelezileyo kunye nentambo ekhethekileyo yocingo.
Ukuhlelwa kwentambo yentsimbi yentsimbi
Intambo yocingo eyenziwe ngegalvanized yohlulwe yazintlobo ezimbini: intambo yocingo ebandayo kunye nentambo yocingo eshushu. kunye ne-zinc compound kuqala, yenza umaleko we-zinc ococekileyo ngokulandelelana kumphezulu we-iron kunye ne-zinc compound.
Ngaphambili: Isilingi sentambo yentsimbi
Okulandelayo: Isilingi sewebhu esicaba
Isilingi seNtsontelo yeNtsontelo yeNtsontelo engenaSipili
Intsontelo yocingo lwentsimbi engatyiwayo
Intambo yeNtsontelo yeNtsontelo yeNtsimbi engenaStainless
ILifting Link Chain